अष्ट्रेलिया आउँदै हुनुहुन्छ यो भने अहिलै सोच्नुहोस्
सिद्धार्थ पौडेल print
अष्ट्रेलिया सपनाः ‘कमाउन नसकेको धन र रमाउन नसकेको मन’
अष्ट्रेलिया धेरै नेपालीको लागि एउटा सपनाको देश हो, अझ बिस्तारमा भन्नुपर्दा त उनीहरूको लागि, जसको केही साथीहरू अथवा आफन्त अष्ट्रेलियामा छन्। देखा-सिखी गर्नेको लागि। र अर्को यथार्थ, अष्ट्रेलियाको ब्याग प्याक गरे सँगै सपना र रहरहरु पनि प्याक हुन्छन्।
अष्ट्रेलियाको राम्रो र नराम्रो पक्ष त धेरैले लेखिसक्नु भएको छ। धेरै ठाउँमा यसको कार्यक्रम पनि नभएका हैनन्। तर, कुरा अब अष्ट्रेलियाको फाईदा बेफाईदा हेर्नेभन्दा पनि आफ्नो खुबी र शक्ति कती छ भनेर मुल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ।
बिगतका केही वर्षभन्दा अहिले अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ र यसको कारण अष्ट्रेलियाप्रतिको रूची मात्र नभएर नेपालको अस्सेस्मेन्ट् लेवेल बढेर २ मा पुग्नु पनि हो। जस लगत्तै अष्ट्रेलिया आउने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यसको साथ् साथै बिभिन्न घटना र दुर्ब्यसन् पनि बढ्दो छ। कुलत र डिप्रेसन अहिले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीले भोग्दै आएका मुख्य समस्या हुन्।
यस्ता घटनाका मुख्य पात्रमा भर्खर आएका विद्यार्थीनै धेरै छन्।‘के गर्दा ठीक हुन्छ र यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर यस्ता घटना बढ्ने गरेका हुन्,’ सिड्नीमा लामो समयदेखि ब्यवसाय गर्दै आइरहेका एक नेपालीले भने।
सही समयमा सही निर्णय लिन सक्ने नभइ, अपरिपक्क उमेरमा अष्ट्रेलिया होम्मिनु अनी यहाँ (पढाइ, काम र ब्यक्तिगत जीवन) लाई राम्रो सँग ब्यबस्थापन गर्न नसक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।
अनि पढाई,काम,घर र बिलको चक्रब्यूहमा फस्न थाल्छन्। जसको पछाडि दोष विद्यार्थीको मात्र छैन। दोष त उमेर नपुग्दै, अपरिपक्क विद्यार्थीलाई पढ्न (वास्तवमा कमाउन) जा भनेर पठाउने अभिभावकको पनि छ। राम्रो र उचित सल्लाह/परामर्श दिन बसेका हाम्रा शैक्षिक परामर्शदाता बढी ब्यवसाहिक भएर पनि यस्ता समस्या बढ्ने गरेका छन्।
आफ्नो कार्यक्रम भर्खर सुरू गरेको, अष्ट्रेलियामा रहेको नेपाली विद्यार्थीहरुको संगठन CoNSA (Council for Nepalese Students in Australia)को अध्यक्ष भएको नाताले पनि म धेरै विद्यार्थीसँग नजिक छु। धेरैको समस्या सुन्ने गरेको छु। जसमा मैले यी समस्याको दोषि नेपाली विद्यार्थीको परिवारलाई देख्छु। सबै कुरामा परिपक्क हुने उमेर कुरेर साध्य नहोला तर कम्तिमा आफ्नो बच्चा सक्षम भए नभएको मूल्याङ्कन र विचार गरेर मात्र विदेश पढाउन आवश्यक हुन्छ।
यो कुरा भनिरहँदा एउटा भाईले मलाई पठाएको म्यासेज्‌को याद आयो, जसमा उसको पीडामा लुकेको यथार्थले भनिरहेको थियो- ऊ अझै सानै छ र काम गर्दै पढ्न सक्ने बेला भएको छैन। तर यहाँको बाध्यता -काम छ त माम छ, नत्र भोकै।
अर्को मुख्य कुरा त हाम्रा परमर्शदाताले कुन कलेज नेपाली विद्यार्थीलाई राम्रो हुन्छ, कहाँको पढाई पढेर पास गर्न सक्छन् र कति पैसासम्म फी तिर्न सक्छन् भन्ने कुरा बिर्सेंर आफूलाई कुनमा पठाउन सजिलो हुन्छ र कताबाट धेरै कमिसन आउँछ भन्ने सोचाइले गर्दा पनि यहाँ विद्यार्थी पथ पीडित भइरहेका छन्।
राम्रोसँग नबुझी अष्ट्रेलिया जान पाए भईहाल्छ नि भन्दै आत्तिने अभिभावक र कमिसन खान पल्केका ब्यवसाहीकै कारण दिनहुँ नेपाली विद्यार्थी पीडित बन्नुपरेको छ। महंगो कलेजमा एप्लाई गर्‍यो भने भिसा लाग्छ भन्ने भ्रम भरिएका केही परामर्शदाताले अभिभावक र विद्यार्थीलाई सोचाइ परिवर्तन गराएको छ। र अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै तथ्यांक छैन, जुन सस्तो कलेज भएको कारणले गर्दा भिसा रिजेक्ट भएको होस्।
महंगो कलेज फी, घरको ऋण र भने जस्तो काम नपाउनु नै अहिलेको दुर्घटना र दूर्ब्यसनीको मुख्य कारण हो। अनी एउटा सेमेस्टेर सकिने बित्तिकै फाइल बोक्दै कलेज चेन्ज गर्ने चक्करमा हिँड्न वाध्य हुन्छन्। अहिले झन काम नपाउनेको एउटा लाम नै छ। तनाव भुलाउन दूर्ब्यशनीमा लाग्छन्। जब मान्छेलाई धेरै पीडा पर्छ, तब उसले सजिलै अरूको चिल्ला कुराको विश्वाश गर्छ र उसकै पछाडि लाग्छ, अनी फेरि अर्को गिरोहो कोजालमा फस्छ। त्यो पनि हाम्रै नेपालीको गिरोह।
अस्ती भर्खर मात्र एक नेपालीले काम लगाउने भन्दै ५ सय डलरका दरले लगभग १० जना सँग पैसा लिएर सम्पर्कबिहिन भएको खबर हामी सबैले सुन्यौ। एउटा विद्यार्थीको भविश्य र जीवन भन्दा अगाडि पैसा र कसैको स्वार्थ आउनु हुँदैन।
भन्छन् नि कमाउन नसकेको धन, र रमाउन नसकेको मन ले धेरै कुरा बिगार्ने गर्छन् रे। त्यस्तै छ यहाँ अष्ट्रेलिया मा। अष्ट्रेलिया गन्त्यब्य बनाउनेले मात्र होइन, अब बनाउन उत्प्रेरित गर्नेले पनि यसको बारेमा गहिरिएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब नसोचे कहिले सोच्ने? हामीले नसोचे कसले सोच्ने?
सुनेको अष्ट्रेलिया र देखेको अष्ट्रेलिया
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १३, २०७४ १२:१५:४५